दृष्टिकोण Archives ~ Page 10 of 19 ~ Banking Khabar
घटिरहेको सेयर बजारबाट कसरी लिने फाइदा ? बरिष्ठ सेयर विज्ञ गोपाल भट्टको विश्लेषण
शेयर बजार आफैँमा उतारचढाव भईरहने ‘इकोनोमिक भेरिएवल’ अर्थात आर्थिक चर हो । सूचकमा उतारचढाव भईरहनु नै पर्छ । यसले बजारमा आएको सूचनालाई लगानीकर्ताले कसरी मूल्यमा कन्भर्ट गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदिन्छ । स्टक मार्केटको इफिसियन्सी भन्ने एउटा ठूलो सिद्धान्त छ …
नेपालमा बैंक र बैंकरको उदय : यस्ता थिए देशी बैंकर
सुमन बिडारी – आजको युगमा देशको हरेक जिल्लामा बैंकहरुको पहुँच छ । नागरिकहरुले बैंकमा पैसा राख्ने र बैंकबाट पैसा लिने काम गर्छन् । बैंकमा पैसा राखेबापत नागरिकहरुलाई बैंकले ब्याज दिन्छ र ऋणीको हकमा बैंकले ब्याज असुल्ने काम गर्छ । नेपालमा परम्परागत …
वित्तीय संस्थामा ‘सुशासन’ कायम गर्न प्रा. रामप्रसाद दाहालका टिप्सहरु
‘सुशासन’ शब्द सबैको लागि सुन्न र गफ गर्न प्रिय लाग्छ । सबैको सामु उभिएर आफू पारदर्शी र संस्थागत सुशासनमा बँधिएको मान्छे भनेर व्यवस्थापकीय विश्लेषण गर्दा गर्व लाग्छ । संस्थाको लक्ष्य प्राप्तितर्पm चासो र रौश, खुल्दुली र रहरका अभिव्यक्ति पनि व्यक्त …
‘भारु नोटको प्रतिबन्धबाट नेपाललाई फाइदा छ’
शंकरप्रसाद कोइराला । मौद्रिक व्यवस्थापनमा मुद्राको अवमुल्यन गर्ने कुरा स्वभाविक हो । यसको प्रयोग विशिष्ट समयमा विशेष प्रयोगका लागि गरिन्छ । यो निर्णय आफैमा अप्रिय निर्णय हो । मुद्रा अवमुल्यनका निर्णयहरु विगतका दिनमा अमेरिका, यूरोप, भारत र नेपालमा पनि भएका छन् …
‘भारुले निम्त्याएको समस्याबाट भविष्यका लागि सिकौँ’
डा. हरि रोका – राज्यको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार समय–समयमा पैसाको डिमोर्टिलाईज(अवमूल्यन) गर्नु अस्वभाविक होइन । अवमुल्यन भनेको पैसाको मुल्यलाई ह्रास गर्नु हो । यो प्रणाली संसारभरि नै चलिरहन्छ । भारतमा सन् १९४६ मा पनि १ हजार र १० हजारको नोट खारेज …
भारतीय निर्णयले खुलाएको ‘चेत’ : विदेशी मुद्रा असुरक्षित हुन्छ
भीष्मराज ढुंगाना – केही प्राध्यापक र अर्थशास्त्रीले नेपालमा हुने मुद्राको प्रयोगमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय रुपैयाँ (भारु) ले ओगटेको अनुमान गर्दै आएका छन् । एउटा देशमा अर्को मुलुकको मुद्रा प्रचलित हुने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीले ‘डलराइजेसन’ भन्ने गरेका छन् । यदि यस …
‘नेपालमा पनि कालोधन छ, भारतीय नीति लागू गर्न सकिन्छ’
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर – पाँच सय र हजार दरका नोटहरु नेपालमा प्रतिबन्धित थिए । नरेन्द्र मोदी आएपछि २५ हजार रुपैयाँसम्म करोबार गर्न सक्ने भनिएपछि त्यस्ता नोटहरु पछिल्लो चरणमा नेपालमा धेरै आएको अनुमान गरिन्छ । खासगरी तराई र भित्रि भागमा …
‘अब बैंकहरु गाउँ पस्नुपर्छ’
अनिल केशरी शाह, उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ – नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति बाक्लो छ । यद्यपी कतिपय तथ्याङकले भने अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्दैनन् भन्ने देखाएका छन् भने झण्डै २० प्रतिशत नेपाली पूर्ण …
सहकारी व्यवस्थापनका चार सूत्रहरु
‘प्रणव किन गए, किन आए थाहै भएन’
रामप्रसाद दाहाल – दिल्लीबाट आकस्मिक फोन आयो । उठाएँ मित्र रहेछन् अघोरी प्रसाद । नाम जस्तो भएपनि मन सफा भएका दिलवाले मित्र हुन् । दिल्लीमा बस्छन् । के के सानो तिनो व्यवसाय गर्छन् । आर्थिक उन्नतिका कुरा निकै गर्छन् । सादा …